Shallot Seed ထုတ်လုပ်သူများ - China Shallot Seed Factory & Suppliers
ခြုံငုံသုံးသပ်ချက် အမြန်အသေးစိတ် အမျိုးအစား- ကြက်သွန်အစေ့များ အရောင်- အစိမ်း၊ အဖြူ မူရင်းနေရာ- Hebei၊ တရုတ် အမှတ်တံဆိပ်အမည်: SHUANGXING မော်ဒယ်နံပါတ်: SXGO No.1 မျိုးစပ်: YES PLANT HEIGHT: 150cm Resistance: ...
SXGO No.4 Green Little Shallot Seeds ဟင်းသီးဟင်းရွက် အစေ့များ
ခြုံငုံသုံးသပ်ချက် အမြန်အသေးစိတ်အသေးစိတ် အမျိုးအစား- ကြက်သွန်နီ အစေ့များ၊ Tube အရောင်: အစိမ်းရောင်၊ အဖြူရောင် မူရင်းနေရာ- Hebei၊ တရုတ် အမှတ်တံဆိပ်အမည်: SHUANGXING မော်ဒယ်နံပါတ်: SXGO No.4 မျိုးစပ်: YES အပင် အမြင့်: 30-45cm အဖြူရောင် အညှာ အရှည်: 10cm ခုခံမှု- ရောဂါ နှင့် အအေးထောက်ခံချက်- CO;CIQ;ISTA;ISO9001 ထုတ်ကုန်ဖော်ပြချက် SXGO No.4 အစိမ်းရောင် ရှလော်စေ့ အစေ့များ ဟင်းသီးဟင်းရွက် အစေ့များ 1. ဖြောင့်စင်းသော အရွက်စိမ်းများ၊ အပင်အမြင့် 30-45 စင်တီမီတာ၊ ပြွန်အမျိုးအစား။2. အဖြူရောင်အညှာအရှည် 10 စင်တီမီတာ။3.အရသာကောင်း...
တရုတ်မျိုးစေ့ Chive Seeds SXC No.2
ခြုံငုံသုံးသပ်ချက် အမြန်အသေးစိတ်အချက်များ အမျိုးအစား- ကြက်သွန်အစေ့အရောင်- အစိမ်း၊ အဖြူ မူရင်းနေရာ- Hebei၊ တရုတ် အမှတ်တံဆိပ်အမည်: SHUANGXING မော်ဒယ်နံပါတ်: SXC No.2 မျိုးစပ်: YES အပင် အမြင့်: 55 စင်တီမီတာ အနံ: 1-1.5 စင်တီမီတာ အရွက် အရှည်: 35- 38cm အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်- CO;CIQ;ISTA;ISO9001 ကုန်ပစ္စည်းဖော်ပြချက် တရုတ်မျိုးစေ့ Chive Seeds SXC No.2 1. အမြင့် 55 စင်တီမီတာ၊ အရွက်အကျယ် 1-1.5 စင်တီမီတာ၊ အရွက် 35-38 စင်တီမီတာ၊ အစိမ်းရောင် အရွက်။၂။အရွက်အခွံထူ၍ ခိုင်ခံ့သောထွန်ယက်ခြင်း။၃။နှစ်စဉ်...